चीनसँग सीमाको विवाद छैन
२०७७ श्रावण १ बिहीवार
असार १४, २०७७ आईतवार
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीनका लागि राजदूत नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँ केही दिनमा त्यता प्रस्थान गर्दै हुनुुहुन्छ । राजदूत पाण्डे कुनै पनि देशको सम्बन्ध त्यो देशको आकारले भन्दा पनि सार्वभौमिकता सोचले बलियो बनाउने विश्वास राख्नुहुन्छ । नेपालको लिपुलेक क्षेत्रको नाका प्रयोग गर्ने भनी भारत–चीनबीच सम्झौता हुँदा नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक नोट थमाउनुभएका उहाँसँग गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक श्रीओम श्रेष्ठ र संवाददाता चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानी :
परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा र अहिले राजदूत हुँदा नेपालमा परराष्ट्र नीति निर्माणको अनुभव कस्तो पाउनुभएको छ ?
म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा संविधान निर्माणमा लागेका बेला हाम्रो विदेश नीति कस्तो हुने, घरेलु नीति कस्तो हुने, संस्कार संस्कृतिको नीति कस्तो हुने भन्ने छलफल भयो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा अगाडिको संविधानमा पनि लेखिएको थियो । कतिपय परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने, सरकार चलाउनेले लेखिएकोभन्दा आफ्नो ढङ्गले चलाउने व्यवहार बढी थियो । हामीले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा मुलुकको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दियौँ । सरकार परिवर्तन हुन सक्छ तर एउटा मुलुकको छिमेकीहरूसँग गर्ने, मित्रराष्ट्रहरूसँग गर्ने र विभिन्न देशहरूसँग कायम राख्नुपर्ने सम्बन्धका बारेमा खासै फरक पर्दैन । त्यसैले संविधान निर्माण गर्नेक्रममा हाम्रो मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्यौँ । परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिको प्रतिच्छाँया हो । घरेलु नीति राम्रो हुन परराष्ट्र नीति राम्रो हुनुुपर्छ । अहिलेको संविधानमा कुनै पनि पार्टीले नेतृत्व गर्दाखेरि आधारभूत कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भनेर परराष्ट्र नीतिका बारेमा लेख्यौँ । हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डतामा परिवर्तन हुने कुरा भएन । त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, सार्कको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएका विभिन्न सन्धि, सम्झौता, भियना कन्भेन्सनले लिएका प्रोटोकललाई आधार बनाएर परराष्ट्र नीति व्यवस्थित ग¥यौँ ।
कसैसँग पनि शत्रुता हुँदैन, सबैसँग मित्रता हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर यतिबेला परराष्ट्र नीतिमा केही अगाडि बढेका छौँ । कहिलेकाहीँ केही मुद्दा उठ्यो भने हामीले त्यसलाई मित्रवत् ढङ्गबाट समाधान गर्ने र मित्रतालाई नै प्राथमिकता दिएर आफ्ना नीतिहरू चलाउँछौँ ।
अहिले चीनका लागि राजदूतका रूपमा जाँदै गर्दा कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ?
छिमेकी राष्ट्र चीनको राजदूत भएर जाँदै छु । अहिले संसारमा चीन एकदम छिटो आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रूपले परिवर्तन भएको र सम्पन्नतातिर गइराखेको मुलुक हो । विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो र वैदेशिक लगानीमा पहिलोमा छ । संसारको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या त्यहीँ छ । काम गर्न चाहने मान्छेले जहिले पनि काम गर्ने अवसर भयो भने केही काम गरौँ भन्ने हुन्छ । मसँग पनि छ । चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध उहिल्यैदेखिको हो । संस्कार, संस्कृति र भाषाको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको पालामा चीनबाट शिक्षक ल्याएर २५० रुपियाँ दिएर महँगोमा चिनियाँ भाषा सिकाएको ऐतिहासिक तथ्य छ । भाषा जहाँ उब्जेको छ, त्यहाँ कल्चर (संस्कार संस्कृति) हुन्छ । भाषा जोगाउने भनेको संस्कारलाई जोगाउने हो । संस्कार एउटा इतिहासबाट आएको हुन्छ, त्यसलाई भविष्यमा पनि सिकाउनुपर्छ । चीनसँगको हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध, संस्कार सम्बन्ध, चीनको सामाजिक आर्थिक कुराहरूमा तिब्बतबाट नुन आउने, कच्चा पदार्थमा ऊन, राडीपाखी आउने कुरासँग पनि जोडिन्छ । नेपालबाट खुर्सानी र खाद्यान्न पठाउने गथ्र्यौं । चिनियाँ वादशाहले कोसेली बोकाएर नेपालको राजाकहाँ पठाउँथे । नेपालबाट पनि कोसेलीलाई ६ महिना लगाएर चिनियाँ वादशाहकहाँ पठाउने गरिन्थ्यो । अर्थात् हाम्रो सम्बन्ध परम्परादेखि नै सामाजिक, साँस्कृतिक र जनजीवनसँग जोडिएको हो, यसलाई अझ गहन बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
चीनमा रहँदा के–के कुरा गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
चीनमा प्रविधिको विकास तीव्र छ । ज्ञान र सीपको विकास क्रमसँगै नेपाललाई लैजानुपर्छ । चीनलाई हेर्दा १९४९ भन्दा अगाडिको र ८० को दशकको चीनलाई मात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट सिक्नेमात्र हो । अहिलेको चीन कहाँ छ, संसार कहाँ छ, अहिले हामी कहाँ छौँ, त्यो हेर्ने हो । आफ्नो हितका नाममा अरूलार्ई आघात पार्ने, नकारात्मक भावना आउने काम गर्नुहुँदैन ।
चीनसँगको सम्बन्धमा तीन÷चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अरू सुदृढ, अरू विश्वासयोग्य, अरू सहयोगी बनाउने ढङ्गले लैजाने हो । राजनीतिक र वैचारिक रूपमा सौहार्द बनाउने, एकले अर्कोलाई भर पर्न सक्ने, सघाउन सक्ने ढङ्गले जानुपर्छ । देशहरू अर्थतन्त्र, भूगोल, विकासका हिसाबले तल माथि हुन सक्छन् । तर सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताको हिसाबले देश सानो ठूलो हुँदैन । हामीले त्यही अपेक्षा गर्ने हो । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा चीन लगानीको हिसाबले एक नम्बर र अर्थतन्त्रको हिसाबले दुई नम्बरमा छ । चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै मानिसलाई यही सन् २०२० मा गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउने योजना छ । त्योसँग हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी समन्वय गरेर जाने भनेर सोच्नुपर्छ । टेक्नोलोजी, कृषि, विज्ञान प्रविधिमा, उद्योग व्यवसायमा, हाम्रो व्यापार संलग्न भएका सङ्घ संस्थाहरू र चीनमा भएका व्यापार व्यवसायको समन्वय गर्न सक्छौँ । विश्व सम्बन्ध, बौद्धिक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान गर्ने, थिङ्कट्याङ्कको बीचमा सम्बन्ध गाँसेर आदान–प्रदान गर्न सक्छौँ । पत्रकारितामा कम्युनिकेसन र टेक्नोलोजीको बीचमा हामीले सम्बन्ध कायम गराइदिन सक्यौँ भने यो क्षेत्रमा पनि विकास होला ।
चीन कुरीति हटाउनुपर्छ भनेर लागेको छ । वुहानमा कोरोना भाइरस लागेपछि यति छिटो ‘लकडाउन’ ग¥यो र त्यहाँका डेढ करोड जनसङ्ख्यालाई घरभित्र राखेर उपचार ग¥यो । पश्चिमका देशले राइट टु फ्रिडम (स्वतन्त्रता)मा नियन्त्रण भयो भने । चिनियाँले ‘राइट टु लाइफ इज प्रायोर टु राइट टु फ्रिडम’ भने । पहिलो मानिस बाँच्नुप¥यो । त्यसपछि न स्वतन्त्रता महसुस गर्ने हो भनेर लागे । त्योबाट पनि हामीले के सिक्नुपर्छ भने पहिला राइट टु लाइफ (बाँच्न पाउने अधिकार)चाहिँ हुनुपर्छ । राइट टु फ्रिडमलाई विस्थापित गर्ने भन्ने हैन । चीनका उत्पादनलाई ल्याएर उपभोग गर्नेमात्र हैन, त्यहाँका सकारात्मक उपलब्धिबाट सिक्ने र यहाँ कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नुपर्छ भन्ने चिन्तन मेरो छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग ऐतिहासिक ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्रान्जिट (पारवहन) सम्झौता भयो । दोस्रो कार्यकालमा प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भयो । त्यसअनुसार चीन र तेस्रो देशमा पुग्न सातवटा ‘ड्राइपोर्ट’ प्रयोग गर्ने सवालमा कानुनी प्रावधान दिलाउनका निम्ति कसरी सोच्नुभएको छ ?
चीनसँग हामीले व्यापार र पारवहन सम्झौता गरेका छौँ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला त्रिदेशीय अवस्था सुमधुर, सुखद थिएन । एकातिरबाट नाकाबन्दीको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री एक खालको अडान लिएर भारतसँग समस्या समाधान गर्न लाग्नुभयो । नाकाबन्दी पछि केही विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भयो । भारत गएर आफ्नो अडान स्पष्ट गर्नुभयो । पछि चीन जाँदा पनि आफ्नो अडान प्रस्ट राख्नुभयो । परेको बेलामा सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । चीनले पेट्रोल, डिजेल अनुदानमा पठाइदियो । गाह्रो, साँघुरो भएको बेलामा असल साथीको जस्तै सहयोग पायौँ । हाम्रो राष्ट्रपति पनि चीनमा जानुभयो । त्यो बेलामा केही सम्झौताहरू भए । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउनुहुँदाखेरि २० वटा सम्झौताहरू भएका छन् । त्यसमा सातवटासम्म बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्न सक्ने भएका छौँ । बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सवालमा हाम्रा उत्पादनहरू हुनुप¥यो । त्यो रुटबाट जाने वस्तु हुनुप¥यो । त्यो रुट भएर हिँड्ने जनसमुदाय हुनुप¥यो । त्यहाँ जाने साधनहरू हुनुप¥यो । तेस्रो मुलुक कहाँ जाने, के लिएर जाने हो, त्यहाँबाट के ल्याउने हो ? त्यो कुराहरू हामीले मिलाउन सक्ने अवस्था छ ।
बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत के–के योजना बनाउने भन्नेबारेमा केही छलफल गर्नुभएको छ ?
बीआरआईमा मानिसले अनेक अर्थ लगाउँछन् । नेपालीमा एउटा उखान छ– कुण्ड–कुण्ड पानी मुण्ड–मुण्ड बुद्धि । आफ्नो मुण्डले जे देख्या हुन्छ, त्यही कुरा भन्ने हो । कुनै पनि मित्र राष्ट्रले अर्को मित्र राष्ट्रलाई कच्याककुचुक्क पारौँ भनेर लाग्या हुँदैन । कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिणाम देखापर्न सक्छ, त्यसमाचाहिँ सचेत हुनुपर्छ । बीआरआईलाई हाम्रो राष्ट्रको प्रगति, उन्नति र यसको अनुकूल बनाएर कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्नेमा जानुपर्छ । यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, लाइन मिनिस्ट्रीहरू, योजनाकारहरूसँग भेटेर छलफल गरेको छु । बीआरआई कुनै टापुमा बनाएको छाप्रोजस्तो हैन । हाम्रो जीवन पद्धतिमा विकास गर्ने एउटा योजना हो । सडकको कुरा गर्दा उनीहरूले सिगात्सेसम्मका लागि सामान ल्याइसकेका छन् । केरुङबाट यतापट्टि ल्याउने कुरामा माथिल्लो भागमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन त्यति राम्रो छैन । टोखा–छहरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन उहाँहरूले गर्नुभयो । डीपीआर बनेको छैन । नुवाकोटमा बेत्रावतीबाट स्याफ्रुबेँसीसम्म टनेल बनाउने भनिएको छ । त्यसको अध्ययन गर्न बाँकी छ ।
चीनका राष्ट्रपति आउँदा भएका सम्झौता शिक्षा, सडक, कृषिमा, वाणिज्य र अन्य सबै प्राथमिकतामा छन् । मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय र प्रौद्योगिक विश्वविश्वविद्यालयको कुरा छ । त्यो अनुसन्धान तहको जनशक्ति निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा छ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय निर्माण गर्ने विषय छ । यहाँ चिनियाँ बैङ्क नभएको कारणले हाम्रो यहाँ पेमेन्ट गर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा आएको छ । कुनै न कुनै रूपमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने राम्रो हुनेछ । संसारमा अब चिनियाँ भाषा र चिनियाँ बैङ्क अनिवार्य भइसक्यो । यसमा मेरो प्रयत्न रहनेछ ।
राजदूतलाई राजदूतावासमा राखेर जिम्मेवारी दिएको मुलुकको सरकार, संस्थाहरू र जिम्मेवारी दिएर पठाउने आफ्नो देशको सरकार र संस्थाहरूबीचको सम्बन्धलाई थप गति दिने, जोडेर राख्ने हो । त्यहाँ कतै शिथिलता आउन नदिने र थप चलायमान गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रप्रति सी चिनफिङले नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखेको ‘ल्यान्ड लक्ड’बाट ‘ल्यान्ड लिङ्क्ड’मा जाने सपनालाई हामी सहयोग गर्छौं भन्नुुभयो । यसले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न खोजेको हो ?
ल्यान्ड लिङ्क्डको कुरा गर्दा दुईवटा देशमात्र जोडिँदैन । तेस्रो पाटो पनि जोडिन्छ । कहिलेकाहीँ मान्छे कहाँ उभिएको छ, त्यो ‘पोजिसन’ले पनि वस्तुलाई हेर्छ । त्यसले वस्तुको चित्र फरक–फरक देख्छ । सम्बन्धहरू पनि त्यस्तै हो । २१औँ शताब्दीको चेतनाले संसारभरका मुलुक र त्यहाँका जनताका बीचमा गर्र्नैपर्ने र हुने कुरा मित्रता हो भन्छ । कहिलेकाहीँ कच्याककुचुक भैहाले पनि त्यस पछाडिको सम्बन्ध पहिलेभन्दा बलियो हुन्छ । राजनीतिक प्रणाली फरक हुन सक्छ । तर, मान्छेको जीवन उस्तै हो । स्वाद र रुचि फरक हुन सक्छ, उसका आधारभूत आवश्यकता उस्तै हुन् । ल्यान्ड लिङ्क्डमा त्यसरी नै काम हुन्छ । हामीले उताबाट रेल लुम्बिनीसम्म ल्याउने भनेका छौँ । छिमेकी मित्र भारतले काठमाडौँसम्म हामी सहयोग गर्छौं भनेका छन् । लिङ्क त यही हुने भयो ।
चीनमा भएको तीर्थस्थल मानसरोवरमा नुहाउने भारतकै जनता बढी हुन्छन् । प्रविधिमा भारत हो भने पनि बनाएर ल्याउने चीन हो । सबै एक–अर्कोमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले हामी प्रगति गरेर नै लिङ्क्ड हुन चाहन्छौँ । नेपालमा आउने र जाने बाटोमात्र हैन, यो बास बस्ने र काम गर्ने ठाउँ हामी बनाउँछौँ । यो हाम्रो सपना हो, उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ । दक्षिणमा खुला सीमा छ । उत्तरमा हिमालले छेकेको छ । तर, त्यो चीनसँगको बाधा हैन, मित्रताको स्तम्भ हो । त्यसैले हाम्रो विवाद छैन । एकचोटि हामीले सीमा रेखाङ्कन ग¥यौँ । एकचोटि हस्ताक्षर ग¥यौँ । डकुमेन्ट हाम्रो अगाडि छ ।
तपाईं परराष्ट्रमन्त्री रहँदा भारत र चीनबीच सम्झौता भएका बेला दुई देशका राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोट थमाउनुभएको थियो । अहिले नेपाल र भारतको बीचमा देखिएको सीमा विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?
भारत नेपालको सीमामा जुन विवाद छ, त्यो विवाद उताबाट सिर्जित हो । हामीबाट विवादै होइन । इतिहासका तथ्यहरूले पुस्ट्याइँ गरेपछि हामीले त्यहाँ विवादै गर्दैनौँ । त्यो भूमि हाम्रो हो । जुन बेलामा सुगौली सन्धि भयो, त्यसमा जुन कुरा लेखियो, त्यो आधारमा जमिन र त्यहाँका जनता हाम्रा हुन् । धेरै प्रमाण छन् । त्यसैले तथ्यहरूका आधारमा सत्य खोज्ने भन्ने आजको संसारमा स्थापित तथ्य छ । तथ्यहरूलाई हामीले हेरेर त्यो समाधान गर्नुपर्छ । नक्सामा मात्र हैन, जमिन पनि हाम्रै हो ।
भारतजस्तो एउटा विशाल देश, नेपालजस्तो छिमेकी, जो सधँैभरि उसको शुभेच्छुक छ, उसलाई नचिढ्याउने भन्छ, उसको सुखद पक्षलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षमा सघाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताको निमित्त भारतले जान खोजेको बेलामा हामीले विनासर्त समर्थन हुन्छ भन्यौँ । यस्तो मित्र राष्ट्रको अलिकति जमिनमा कुनै बेलामा कुनै कारणले केही मान्छे र सेना राख्नुभयो । अब पनि त्यो कुरामा किचमिच गरेर यस्तो मित्रराष्ट्रलाई उहाँहरू (भारत) ले चिढ्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो जमिन एउटा बेलामा प्रयोग भयो । अबको चेतना र आवश्यकताले फिर्ता दिनुपर्छ । पुराना कुराले अडिएर मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा खलल पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो भूमिलाई लिएर नेपाललाई कसैले उकास्छ भन्ने छैन । सौहार्दपूर्ण ढंगबाट प्रयोग गर्न दिनुभएकोमा नेपाललाई धन्यवाद, मित्र भनेको गाह्रो साँघुरोमा साथ दिने यस्तै हुन्छ भन्दै उहाँहरूले त्यो जमिन छोड्नुपर्छ । र, छोड्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको त्रिदेशीयभन्दा पनि दुई देशको मुद्दा हो । सिमानाहरू बनाउँदा र सिमानालाई टुङ्गो लगाउँदाखेरि जहिले पनि त्यो देशको सिमानाको पिलर जिरोबाट सुरु हुन्छ । त्यसपछि १, २, ३ हुँदै जान्छ । चीनसँग सिमाङ्कनको सम्झौता सन् १९६१ मा भयो । त्यहीबेला १९६१–१९६२ मा दुई छिमेकीहरूको बीचमा कटुता थियो । लडाइँ भैरहेको थियो । वातावरण त्यति सौहार्द थिएन । त्यही ठाउँमा हामीले सिमाङ्कन गर्नुपर्ने हुनाले एउटा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भयो । अहिले पिलर नम्बर १ बाट हामी बनाउँ बाँकी रहेको ठाउँमा पछि बनाउने भन्यौँ । चीनसँगको सिमानाको सम्बन्ध पश्चिममा पिलर १ बाट हामी पूर्व लागेका छौँ । पिलर नम्बर १ बाट जिरोसम्म जाने ठाउँको निक्र्यौल भैसकेको छैन । किनभने दक्षिणपट्टिको साथीले हाम्रो जमिन कब्जा गरिदिएको छ । त्यो जमिन हामीले लिइसकेपछि हामी जहाँसम्म पुग्छौँ, त्यो दुईवटा ठाउँमा उहाँहरू जोडिन आउनुहुन्छ । त्यो त्रिदेशीय बिन्दु हुन्छ । त्रिदेशीय बिन्दु बनाउने क्षेत्रमा दुई देशले समझदारी गरेको छ, त्यो जमिनमा तपाईंहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले दुवै देशलाई नोट पठायौँ । यदि त्यस्तो छ भने त्यसमा विचार गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक कुरा उत्तरबाट आयो । तर, त्यो हाम्रै जमिन हो भन्नेखालको व्यवहार दक्षिणले गरेर बस्यो ।
त्यहीबेलामा भेट्न आएका एकजनाले त्यो जमिन राजा महेन्द्रले दिएको रे भने । तपाईंले त्यस्तो सुन्नुभएको छ भने मलाई प्रमाण ल्याइदिनुस् भनेर पठाएँ । पछि भारतीय सेनापतिले बोलेपछि एकजना संवाददातालाई मैले भनेको थिएँ, “कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा सैन्यलाई अगाडि सारेर हुँदैन । मित्रतालाई यसले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । धम्की दिएर समस्याको समाधान हुँदैन । एक ठाउँमा बसेर तथ्यहरूका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।” पछि केही मिडियामा फलानाले राजाले जमिन दिएको भनेको, लेखेको सुनेँ ।
म परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । त्यसबेला कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या टुङ्ग्याउन सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने कुरा संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त संयुक्त वक्तव्य नहेरी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि नसोधी केही बुद्धिजीवी भन्नेहरूले स्रोतका नाममा अफवाह फैलाउने गरी मिडियावाजी गरेकोमा मेरो आपत्ति छ ।
चीनसँगको व्यापार सम्बन्धमा आयात बढेको बढ्यै, निर्यात घटेको घट्यै छ । त्यसमा भएका अप्ठेरो र लिनुपर्ने लाभ के–के हुन् ?
चीनमात्र हैन, नेपालसँग भारत वा अरू मुलुकसँग हाम्रो व्यापार असन्तुलन छ । सन्तुलनमा लैजाने हो भने हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । डा. सन्दुक रुइतले नेपालमै तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा आँखा अपरेसनपछि हाल्ने लेन्स उत्पादन गर्नुहुँदोरहेछ । नेपालबाट चीनमा लेन्स सप्लाइ हुने रहेछ । उत्पादनको स्केल बढाउन सकेमा लाभ लिन सक्छौँ । मित्रराष्ट्रले उद्योग बनाइदिने हामीले खेर फाल्ने गर्नुहुँदैन । नेपालका केही विज्ञले नेपालमा रेल ल्याउन सक्दैन भन्थे । रेल आउने भयो भन्ने ठाउँमा पुगेपछि ऋणमा बनाउनुहुँदैन भने । अनुदान छ भने ल ठीक छ आउँछ भने आओस् भने । अनुदान त झन् सदुपयोग गरेर, उहाँहरूलाई विश्वास दिलाएर अरू अनुदान दिने बनाउनुपर्छ । वस्तु आयात निर्यात गर्दा वाणिज्य मन्त्रालय र अन्य लाइन मिनिष्ट्रीको पनि भूमिका हुन्छ ।
नेपालमा पर्यटनको क्षेत्रमा सम्भावना छ । प्रत्येक दस किलोमिटर उत्तर जानुहुन्छ भने नयाँ हावापानी छ । नयाँ किसिमको समाज र संस्कार छ । त्यो विदेशीलाई पस्कन सक्नुपर्छ । भँुइचालो आउँदा नेपालमा सबै जातका सबै थरीमा मानिस एउटै टेन्टमुनि बस्न सक्ने सद्भाव र समाज छ । यो कुरा नेपालले सिकाउन सक्छ । धर्मका लागि मानिस हैन मानिसका लागि धर्म भन्ने कुरा बुझाउन सक्छौँ । हाम्रा मन्दिरका टुँडालका सभ्यता र कलाकौशल पस्कन सक्छौँ । विचार पद्धतिमा थिङ्कट्याङ्क आदान–प्रदान गर्न सक्छौँ ।
आयात गरेर आवश्यकता पूरा गर्नुभन्दा वस्तु आफैँ उत्पादन गर्नुपर्छ । आयातलाई बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । अरू मुलुकहरूमा के आवश्यकता छ र हाम्रो स्रोतहरू के छ भन्ने अध्ययन गरेर स्रोतहरूलाई विकास गर्नुपर्छ । उद्योग कारखानामा रिफाइन गरेर निर्यात बढाउनुपर्छ । उद्योगमा आधारितभन्दा व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र भयो । भएका उद्योग हामीले कौडीका भाउमा बेचिदियौँ । हामीले फेरि मन जितेर गर्छौं भनेर लाग्नुपर्छ । स्वदेशमा सीप विकास गर्दै हामीसँग भएका कुराहरूको पेटेन्ट राइट बनाउनुप¥यो । जडीबुटीहरू, यार्सागुम्बा नेपालमा पाइन्छ, त्यसलाई संरक्षण र विस्तार गर्नुपर्र्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङ यहाँ आउनुहुँदा अमिलो जातका फलफूल निर्यात गर्ने भनी गरिएको सम्झौताअनुसार कागती, निबुवा, भोगटे, सुन्तला, ज्यामिरलाई हाम्रै पाखापखेरामा उब्जाएर निर्यात गर्न सकिन्छ ।
नेपालका नेताहरूले चिनियाँ नेताहरूबाट प्रशिक्षण लिएका कुरामा एकखालको धारणा बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सम्बन्ध यो सरकारको पालामा कसरी अगाडि बढ्ला ?
अमेरिकामा कोरोनाबाट मानिस मर्दै जाँदा भारतमा उत्पादन भएका औषधि पठाइदेऊ भनेर त्यहाँका राष्ट्रपतिले भन्नुभयो । बीचमा एउटा हिन्दु पण्डितलाई लगेर ह्वाइट हाउसमा होम हालेर पूजा गरे । पण्डितले त्यसो गरेपछि त्यो मुलुक हिन्दु भयो त ? आदम स्मिथले फ्री मार्केटको किताब ल्याए । क्यापिटालिजम्मा कुनै कुराको करकाप हुँदैन भनेर लेख्या छन् । आदम स्मिथको किताब पढ्दैमा हामी अमेरिकन हुन्छौँ र ? माक्र्सको किताब पढ्दा हामी कम्युनिस्ट भइहाल्ने, पेकिङ युनिभर्सिटीमा पढेर आउँदाखेरिमा कम्युनिस्ट हुने, हार्वडमा पढेर आएपछि क्यापिटालिस्ट भएर आउने हुन्छ र ? हार्वड युनिभर्सिटीमा २५÷३० हजार माक्र्सका किताब छन् । तिनले मार्कसिस्ट हुन पढ्छन् र ? अहिले संस्कृृतको पढाइ जर्मनीमा, अमेरिकामा हुन्छ । यो पढेपछि उनीहरूको धर्म सिद्धिन्छ त ? त्यस्तो हैन । ज्ञानको सीमा हुँदैन । विज्ञानको, चेतनाको सीमा हुँदैन । संसारमा आएका कुराहरू जहाँसुकैका मान्छेले पढ्न, सिक्न, लेख्न सक्छन् । कति सकारात्मक कति नकारात्मक लिने र अनुकूल व्याख्या भने आफैँ गर्नुपर्छ ।
बाँकेमा अब १२ जना मात्र निको हुन बाँकी, जिल्ला कोरोना शून्य हुँदै
साढे तीन महिनादेखि ठप्प सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन थाले
मन्त्री विश्वकर्माद्वारा पहिरोका घाइतेको जानकारी
मेलम्चीकाे सुरुङ दुर्घटनामा हराएका इन्जिनियरकाे शव फेला
इन्डोनेसियामा बाढीले बगाएर १६ को मृत्यु, २३ बेपत्ता
साउने सङ्क्रान्तिमा कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा
जापानको अर्थतन्त्र अर्को वर्ष ४.७ प्रतिशत खुम्चिने केन्द्रीय बैङ्कको भनाइ